About – Myanmar NGOs and NPOs
This directory seeks to provideacomprehensive overview of non-profit organizations and community groups that are active in and for Myanmar (Burma).
The objective is to facilitate better networking of civil society and to connect both registered and informal groups.
The directory itself is part ofanon-profit project. Submitting and accessing the data are free.
Conditions for Listings
If you submitalisting, you agree to the following terms:
Both Burmese and international organizations are permitted. An organization can also beagrassroots group oracommunity organization that is not officially registered.
Your organization must – as one of its core activities – undertake activities inside Myanmar (Burma), or work (in any country) for Myanmar or for people from Myanmar.
Your organization must be strictly non-profit and non-governmental.
Your organization must not be connected or associated toapolitical party.
If your organization (headquarters or any of its branch offices) is based outside Asia, it must be officially registered asanon-profit organization.
Your organization must be sufficiently transparent for verification of its non-profit status.
Your organization must have carried out activities during the past6months.
Your organization must be respectful to others and in particular be non-racist and non-discriminatory, and it must not promote violence.
Information must be submitted in English. (We may later add further languages.)
Your public data will be licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (Logos and other trade marks are not affected). You declare that publishing the submitted data, including photos, under this license does not infringe on any other party’s rights.
We reserve the right to remove listings:
if we find that one or more of the above conditions are not met;
if submitted information is found to be wrong and the author does not provideacorrection;
if an organization is inactive foraconsiderable length of time and its activities must be considered suspended;
if the contact information is outdated and alternative contact details of the organization cannot be established;
if we decide to terminate the entire service.
Listing your organization is free.
Moderation and Changes
Information submitted will not automatically be published asalisting, and listings may be edited before publishing.
If you think that an entry needs to be reviewed, you can flag it. In case ofadispute, the final decision remains with our editors. Legitimate representatives of an organization, however, retain the right to request the removal of their listing at any time.
Although we do our best to keep the database in good shape and verify all entries, we cannot take responsibility for the accuracy, usability and compliance of listings, reviews and links to other websites with our terms and with applicable laws. All information is provided as is. Use it at your own risk. For all terms and disputes, the jurisdiction of the Czech Republic applies.
All public data will be used in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
This directory is managed by the NGO Burma Center Prague as part of the project mycitizen.net. You can contact us via the discussion forum.
မြန်မာ စာ (Zaw Gyi) ::
ဤလမ်းညွှန်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိူးအမြတ်မယူဘဲ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြည့်စုံသော ယေဘုယျအချက်အလက်များကို ရှာဖွေးပေးပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ယက်ကို ကူညီရန် နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မှတ်ပုံမတင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှစ်ခုစလုံး ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤလမ်းညွှန်သည် ၄င်းကိုယ်တိုင် အကျိုးအမြတ်မယူသော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းသည် အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင် စာရင်းဝင်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များကို သဘောတူညီရပါမည်။
သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအတွက် သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံမှ လာသောသူများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရပါမည်။
သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည် အကျိုးအမြတ်မယူသော အစိုးရနှင့်မပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရပါမည်။
အကယ်၍ သင်၏ အဖွဲ့အစည်းကို သို့မဟုတ် ၄င်း၏အဖွဲ့အစည်းခွဲကို အာရှတိုက်ပြင်ပတွင် အခြေစိုက်ထားမည်ဆိုပါက ၄င်းအဖွဲ့အစည်းသည် အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရပါမည်။
သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည် အကျိုးအမြတ်မယူသော အခြေအနေ မှန်ကန်ကြောင်းကို ခိုင်လုံစွာ သိသာထင်းရှားစေရပါမည်။
သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည် လွန်ခဲ့သော ၆လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ရပါမည်။
သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများကိုလေးစားရပါမည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မရှိစေရ။ အကြမ်းဖက်မှုများကို လှုံ့ဆော်ပေးသောအဖွဲ့အစည်း မဖြစ်စေရပါ။
သတင်းအချက်အလက်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တင်သွင်းပေးပို့ရပါမည်။ ကျွှန်တော်တို့သည် အခြားသောဘာသာများဖြင့် ထပ်မံဖော်ပြရန် ရှိပါသည်။
သင်၏ လူထုနှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်ဒေတာများကို Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License အောက်တွင် တရားဝင်လိုင်စင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဤလိုင်စင်အောက်တွင် သင် တင်သွင်းထားသော ဓာတ်ပုံများအပါအဝင် အချက်အလက်ဒေတာများသည် အခြားသော ပါတီများ၏ အခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်ချိုးဖျက်မှု မရှိ်ရပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ရန် အခွင့်အရေးကို ကြိုတင်တင်သွင်းထားပါသည်
အကယ်၍ အထက်ပါ အချက်အလက်များမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အချက်အလက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက
အကယ်၍ တင်သွင်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းသည်ကို တွေ့ရှိပါက၊ စာရေးသူသည် အမှန်ကို မဖော်ပြပါက
အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းသည် ဖော်ပြထားသော အချိန်အတွင်း ဆောင်ရွက်မှုများမရှိလျှင်၊ အဖွဲ့အစည်းကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ဟုသတ်မှတ်ရပါမည်။
အကယ်၍ ဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်သည် ရက်လွန်၍်အသုံးမဝင်တော့လျှင်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ပြောင်းလဲသွားသောသတင်းအချက်အလက်များကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်တော့လျှင်
အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကို အဆုံးသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်
သင်၏အဖွဲ့အစည်း စာရင်းသွင်းခြင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ရပိုင်ခွင့်များ လက်ခံရရှိရန် မရှိပါ။ ဖြန့်ချီခြင်းမတိုင်မီ စာရင်းပါအကြောင်းအရာများကို တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ကောင်းပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ သဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် သင်၏ စာရင်းဝင်ခြင်း အခွင့်အရေး ရရှိရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် စာရင်းတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို သုံးသပ်ရန် လိုအပ်မည်ဟု ထင်ပါက အသိပေးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါက ကျွန်တော်တို့၏ တည်းဖြတ်သူများနှင့် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ကျန်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့အစည်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သည် သူတို့၏စာရင်းဝင်ခြင်း ပယ်ဖျက်မှုကို တောင်းဆိုရန် အခွင့်အရေးကှိုိရရှိပါမည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အချက်အလက်ဒေတာများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အကြောင်းအရာများအားလုံးကို မှန်ကန်ကြောင်း အကောင်းဆုံးပြုလုပ်သော်လည်း စာရင်းဝင်များ၏ လေးစားလိုက်နာမှု၊ အသုံးဝင်မှုနှင့် တိကျမှုကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏ အခြေအနေများ၊ ဥပဒေများနှင့်အတု အခြားသောဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဆက်သွယ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းများကိုလည်းကောင်း တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို ဖော်ပြပြီး ဖြစ်သဖြင့် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
သဘောထားကွဲလွဲချက်များအတွက် ချက်ရီပက်ပလစ်နိုင်ငံ၏ တရားရေးအာဏာပိုင်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာအချက်အလက်များကို ဥပဒေသက်ဆိုင်ရာအားဖြင့် မလိုအပ်ဘဲ ဝေမျှပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အားလုံးသောလူထူဒေတာများကို လိုင်စင်အရသာ (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License)အသုံးပြုပါမည်။
ဤလမ်းညွှန်ကို မြန်မာ့အဖွဲ့အစည်း ပရာဟာမြို့(NGO Burma Center Prague)မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင် ကျွန်တော်တို့ကို ဤနေရာတွင် here ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မွနျမာ (Unicode) ::
ဤလမျးညှနျသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ အကြိူးအမွတျမယူဘဲ ဆောငျရှကျပေးနသေော အဖှဲ့အစညျးမြား၏ ပွညျ့စုံသော ယဘေုယအြခကျြအလကျမြားကို ရှာဖှေးပေးပါသညျ။
ပိုမိုကောငျးမှနျသောလူမှုအဖှဲ့အစညျးကှနျယကျကို ကူညီရနျ နှငျ့ မှတျပုံတငျထားသော အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ မှတျပုံမတငျထားသောအဖှဲ့အစညျးမြား နှဈခုစလုံး ဆကျသှယျပူးပေါငျးရနျ ရညျရှယျပါသညျ။
ဤလမျးညှနျသညျ ၄ငျးကိုယျတိုငျ အကြိုးအမွတျမယူသော စီမံကိနျးတဈခုဖွဈပါသညျ။ အခကျြအလကျမြားကို ရယူခွငျး၊ ပေးပို့ခွငျးသညျ အခမဲ့ ဖွဈပါသညျ။
အကယျ၍ သငျ စာရငျးဝငျမညျဆိုပါက အောကျပါအခကျြအလကျမြားကို သဘောတူညီရပါမညျ။
သငျ၏အဖှဲ့အစညျးသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ သို့မဟုတျ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးအတှကျ သို့မဟုတျ မွနျမာနိုငျငံမှ လာသောသူမြားအတှကျ ဆောငျရှကျပေးနသေော အဖှဲ့အစညျး ဖွဈရပါမညျ။
သငျ၏အဖှဲ့အစညျးသညျ အကြိုးအမွတျမယူသော အစိုးရနှငျ့မပတျသကျသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈရပါမညျ။
အကယျ၍ သငျ၏ အဖှဲ့အစညျးကို သို့မဟုတျ ၄ငျး၏အဖှဲ့အစညျးခှဲကို အာရှတိုကျပွငျပတှငျ အခွစေိုကျထားမညျဆိုပါက ၄ငျးအဖှဲ့အစညျးသညျ အကြိုးအမွတျမယူသော၊ တရားဝငျမှတျပုံတငျထားသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈရပါမညျ။
သငျ၏အဖှဲ့အစညျးသညျ အကြိုးအမွတျမယူသော အခွအေနေ မှနျကနျကွောငျးကို ခိုငျလုံစှာ သိသာထငျးရှားစရေပါမညျ။
သငျ၏အဖှဲ့အစညျးသညျ လှနျခဲ့သော ၆လအတှငျး လုပျငနျးဆောငျတာမြား ဆောငျရှကျပွီးစီးပွီးဖွဈရပါမညျ။
သငျ၏အဖှဲ့အစညျးသညျ အခွားသောအဖှဲ့အစညျးမြားကိုလေးစားရပါမညျ။ လူမြိုးရေးခှဲခွားဆကျဆံမှုမြား မရှိစရေ။ အကွမျးဖကျမှုမြားကို လှုံ့ဆျောပေးသောအဖှဲ့အစညျး မဖွဈစရေပါ။
သတငျးအခကျြအလကျမြားကို အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ တငျသှငျးပေးပို့ရပါမညျ။ ကြှနျတျောတို့သညျ အခွားသောဘာသာမြားဖွငျ့ ထပျမံဖျောပွရနျ ရှိပါသညျ။
သငျ၏ လူထုနှငျ့ဆိုငျသော အခကျြအလကျဒတောမြားကို Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License အောကျတှငျ တရားဝငျလိုငျစငျပေးပါလိမျ့မညျ။ ဤလိုငျစငျအောကျတှငျ သငျ တငျသှငျးထားသော ဓာတျပုံမြားအပါအဝငျ အခကျြအလကျဒတောမြားသညျ အခွားသော ပါတီမြား၏ အခှငျ့အရေးမြားကို ထိခိုကျခြိုးဖကျြမှု မရျှိရပါ။
ကြှနျတျောတို့သညျ စာရငျးမှပယျဖကျြရနျ အခှငျ့အရေးကို ကွိုတငျတငျသှငျးထားပါသညျ
အကယျ၍ အထကျပါ အခကျြအလကျမြားမှ တဈခု သို့မဟုတျ တဈခုထကျပိုသော အခကျြအလကျမြားနှငျ့ မကိုကျညီပါက
အကယျ ၍ တငျသှငျးထားသော သတငျးအခကျြအလကျမြား မှားယှငျးသညျကို တှရှေိ့ပါက၊ စာရေးသူသညျ အမှနျကို မဖျောပွပါက
အကယျ၍ အဖှဲ့အစညျးသညျ ဖျောပွထားသော အခြိနျအတှငျး ဆောငျရှကျမှုမြားမရှိလြှငျ၊ အဖှဲ့အစညျးကို သံသယဖွဈဖှယျဟုသတျမှတျရပါမညျ။
အကယျ၍ ဆကျသှယျရနျ သတငျးအခကျြအလကျသညျ ရကျလှနျ၍ျအသုံးမဝငျတော့လြှငျ၊ အဖှဲ့အစညျး၏ပွောငျးလဲသှားသောသတငျးအခကျြအလကျမြားကို အသိအမှတျမပွုနိုငျတော့လြှငျ
အကယျ၍ ဝနျဆောငျမှုတဈခုလုံးကို အဆုံးသတျရနျဆုံးဖွတျလြှငျ
သငျ၏အဖှဲ့အစညျး စာရငျးသှငျးခွငျးသညျ အခမဲ့ဖွဈပါသညျ။
ရပိုငျခှငျ့မြား လကျခံရရှိရနျ မရှိပါ။ ဖွနျ့ခြီခွငျးမတိုငျမီ စာရငျးပါအကွောငျးအရာမြားကို တညျးဖွတျပွငျဆငျကောငျးပွငျဆငျပါလိမျ့မညျ။ သဘောတူညီမှုရရှိပွီးနောကျ တညျးဖွတျပွငျဆငျခွငျးအတှကျ သငျ၏ စာရငျးဝငျခွငျး အခှငျ့အရေး ရရှိရနျ တောငျးဆိုနိုငျပါသညျ။
အကယျ၍ သငျသညျ စာရငျးတှငျဝငျရောကျခှငျ့ကို သုံးသပျရနျ လိုအပျမညျဟု ထငျပါက အသိပေးနိုငျပါသညျ။
အကယျ၍ သဘောထားကှဲလှဲမှုရှိပါက ကြှနျတျောတို့၏ တညျးဖွတျသူမြားနှငျ့ နောကျဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြ ကနျြရှိပါသညျ။ သို့သျောလညျး အဖှဲ့အစညျး၏ တရားဝငျကိုယျစားလှယျသညျ သူတို့၏စာရငျးဝငျခွငျး ပယျဖကျြမှုကို တောငျးဆိုရနျ အခှငျ့အရေးကှိုိ ရရှိပါမညျ။
ကြှနျတျောတို့သညျ အခကျြအလကျဒတောမြား ထိနျးသိမျးခွငျး၊ အကွောငျးအရာမြားအားလုံးကို မှနျကနျကွောငျး အကောငျးဆုံးပွုလုပျသျောလညျး စာရငျးဝငျမြား၏ လေးစားလိုကျနာမှု၊ အသုံးဝငျမှုနှငျ့ တိကမြှုကိုလညျးကောငျး၊ ကြှနျတျောတို့၏ အခွအေနမြေား၊ ဥပဒမြေားနှငျ့အတု အခွားသောဝဘျဆိုဒျမြားကို ဆကျသှယျခွငျး၊ သုံးသပျခွငျးမြားကိုလညျးကောငျး တာဝနျယူမညျ မဟုတျပါ။
သတငျးအခကျြအလကျမြားအားလုံးကို ဖျောပွပွီး ဖွဈသဖွငျ့ မိမိ၏ကိုယျပိုငျတာဝနျသာဖွဈပါသညျ။
သဘောထားကှဲလှဲခကျြမြားအတှကျ ခကျြရီပကျပလဈနိုငျငံ၏ တရားရေးအာဏာပိုငျနှငျ့သာ သကျဆိုငျပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့သညျ သငျ၏ ကိုယျရေးကိုယျတာ ဒတောအခကျြအလကျမြားကို ဥပဒသေကျဆိုငျရာအားဖွငျ့ မလိုအပျဘဲ ဝမြှေပေးလိမျ့မညျမဟုတျပါ။ အားလုံးသောလူထူဒတောမြားကို လိုငျစငျအရသာ (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License) အသုံးပွုပါမညျ။
ဤလမျးညှနျကို မွနျမာ့အဖှဲ့အစညျး ပရာဟာမွို့ (NGO Burma Center Prague) မှ စီစဉျဆောငျရှကျပါသညျ။ သငျ ကြှနျတျောတို့ကို ဤနရောတှငျ here ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
Posted by mycitizen.net at 10:50 am